पलसँग नाम जोडिएको मन नपराउने आँचल ! - नेपाली प्रोफईंल
konami slots काठमाडौं – नायिका आँचल शर्मा र पल शाहको सम्बन्ध लामो समयसम्म थियो । यी दुईबीच प्रेमसम्बन्ध रहेको समेत चर्चा चल्ने गर्थ्यो । तर पल र आँचलले कहिल्यै आफूहरु प्रेममा रहेको स्वीकार गरेनन् ।
आँचलका बारेमा पल खासै नबोले पनि पलका बारेमा भने आँचल प्रायः बोलिरहन्थिन् । पत्रकारले यो क्षेत्रमा सबैभन्दा नजिकको साथी को भनेर सोध्दा आँचलले भन्थिन् – पल शाह । weer in middelkerke
hyperiplant केही समययता पल र आँचलको सम्बन्ध राम्रो नभएको चर्चा चल्न थालेको छ । त्यसो त आँचलले केही समयअघि आफ्नो ब्यायफ्रेण्ड शेयर गरेकी थिइन् । उनी यतिबेला उदिप श्रेष्ठसँगको प्रेममा छिन् ।
एक म्युजिक भिडियोमा पल शाह र आँचल शर्मा ।
आँचल आफ्नो प्रेमको बारेमा खुलेर बोल्ने गरेकी छिन् । तर, आजकाल उनलाई पलसँग नाम जोडेको मन पर्दैन ।
हालै एक म्युजिक भिडियोको छायांकनमा भेटिएकी आँचललाई पत्रकारले सोधे – पल शाहलाई छोडेर सलोन बस्नेतसँग नाच्दा कस्तो लागिरहेको छ?
उनको उत्तरमा आँचलले भनिन् – हरके प्रश्नमा अब पल जीको कुरा नलिऔं होला । अब मैले अरू कोहीसँग बिहे नै गर्न लागेकी छु भने किन पल जीलाई जोड्ने?
आँचलले पलको नाम सुन्नासाथ मुख बिगारेपछि पत्रकार नै ट्वाँ भएका थिए । पलको नाम सुन्नासाथ कुरा फेरेपछि आँचलले अहिले पलसँग नाम नजोडिएको मन नपराउने स्पष्ट देखिएको छ । teraz
यता पलले पनि आँचलका बारेमा खासै बोल्ने गरेका छैनन् । आँचल अब उदिपसँग बिहे नै गर्ने योजनामा छिन् । propranolol 10 mg tablet
कुनै बेला पललाई ‘बेस्ट फ्रेण्ड’ भन्ने आँचलले अहिले भने पलसँग नाम नै नजोडियोस् भन्ने चाहन्छिन् । उनका फ्यान पनि बडा अचम्ममा पर्छन् । http://visionmendez.com/en-AU/strip-black-jack_13-02-2020